NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်နယူးယောက်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့် Philadelphia တွင်အဘို့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် utah သိပ္ပံလက္ခဏာတွေ CER-TEC
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူးယောက်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့် Philadelphia တွင်အဘို့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် utah သိပ္ပံလက္ခဏာတွေ CER-TEC
SALT LAKE CITY - ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2017 - utah သိပ္ပံ ယနေ့ CER-TEC တစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ရက်ကပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ CER-TEC ၏တစ်ခုလုံးကိုလိုင်းစျေးကွက်ပါလိမ့်မယ် utah သိပ္ပံ ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်နယူးယောက်မြို့မက်ထရိုဧရိယာ, Long Island တွင်နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်မြို့ပြ Philadelphia တွင်ပါဝင်သောကျယ်ပြန့်ဒေသအတွင်းထုတ်လွှင့်အဆုံးသည်အသုံးပြုသူများမှထုတ်ကုန်။
"utah သိပ္ပံ'' s ကိုစနစ်များတစ်ခုထူးချွန်ဂုဏ်သတင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားပြီးသစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိသည်။ Plus အားသူတို့၏အဘယ်သူမျှမ-အခကြေးငွေ 10 နှစ်အာမခံဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမသာမကြုံစဖူးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားတဲ့အရောင်းရဆုံးအမှတ်, "ဆရာယောဟနျ Cerquone, CEO ဖြစ်သူ CER-TEC ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကအခြို့သောအနေ utah သိပ္ပံ ဒီရပ်ကွက်မှာက၎င်း၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ငါစျေးကွက်အသိအမြင်တည်ဆောက်ဒီမှာအသစ်ကအခွင့်အလမ်းများကို၏စည်းစိမ်ကိုချွတ်ဖို့ဆက်လက်မျှော်လင့်တယ်။ "
အတူတူ Leigh Herman အတူ Cerquone ယင်းထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်နယူးယောက်မြို့ဧရိယာ၌အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်လုပ်သူ '' ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပျက်ပြယ်ဖြည့်ဖို့ CER-TEC တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှင့်အတူ utah သိပ္ပံ, CER-TEC ကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်း '' ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာထုတ်လုပ်သူအချို့ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပြင် utah သိပ္ပံ'' s ကိုပြန်လည်ရောင်းချသူများဆက်ဆံရေးနှင့်တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်အရောင်း, CER-TEC ကြော်ငြာ, ပရိုမိုးရှင်းများ, နှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုကိုင်တွယ်ကြလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောသေချာအဖြစ် utah သိပ္ပံ ထုတ်ကုန်အဓိကအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပစ္စည်းကိရိယာများစျေးသည်များ၏အင်တာနက်ရောင်းအားတွင်ကျယ်စွာအပေါ်စာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
"ငါသည် CER-TEC ကူညီဖို့ထက် ပို. အရည်အချင်းပြည့်အဖှဲ့အစညျး၏မစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် utah သိပ္ပံ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အတူအားလုံးဒေသများနယူးယောက်, နယူးဂျာစီနှင့် Philly ဒေသများတွင်စျေးကွက်ဝေစုချဲ့ထွင်, "ရော့ Shevlot ဆိုသည်ကား, utah သိပ္ပံ ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ။ "CER-TEC မြေပြင်ပေါ်မှာငါတို့ဘွတ်ဖိနပ်ဖြစ် 'နှင့်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုရှိနေခြင်းပေးရုံတခုထဲမှာအိမျ salesperson အဖြစ်မယ်လို့လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒီအရေးကြီးသောအရှေ့မြောက်ဒေသမှမိမိတို့၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နက်ရှိုင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုလျှောက်ထားအဖြစ်ကျနော်တို့ဆရာယောဟနျနဲ့သူ့အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက utah သိပ္ပံ မှာရရှိနိုင် www.utahscientific.com.
အေျကာင္းအရာ utah သိပ္ပံ Inc က
utah သိပ္ပံ routing ကို Switcher, မာစတာထိန်းချုပ်မှု Switcher နှင့်ဆက်စပ်ထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အထူးကုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအဘယ်သူမျှမ-အခကြေးငွေ 10 နှစ်ထုတ်ကုန်အာမခံနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အခြေခံစံနှုန်းထားကြ၏။ 1977 ကတည်းကကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုနှင့်အတူ Frost & Sullivan တို့ကသုံးကြိမ်အသိအမှတ်ပြုအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.utahscientific.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/UtahScientific/UtahScientific-CER-TEC.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: CER-TEC ကုမ္ပဏီလိုဂို
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text= CER-TEC နယူးယောက်များအတွက် @UtahSci ကိုယ်စားလှယ်, နယူးဂျာစီနှင့် Philadelphia တွင်အဖြစ်သက်သေလက္ခဏာများ - goo.gl/tdlWPA
အလည်အပတ် utah သိပ္ပံ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth N4506
လိုက် utah သိပ္ပံ:
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CERT-TEC ယောဟနျသ Cerquone ထုတ်လုပ်သူ ဈေးကွက် မာစတာထိန်းချုပ်မှု Switcher Network ကို New Jersey New York Philadelphia တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ related ထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖျဝဲ routing ကို switcher utah သိပ္ပံ	2017-02-24
ယခင်: NAB Show ကိုပထမဆယ်ပါး startup ရှေးခယျြသည် 2017 SPROKIT အစီအစဉ်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: ကို IEEE VR နှင့်အတူ VRLA အပေါင်းအဖေါ်များ VRLA မှာပညာရေးဆိုင်ရာ Track တင်ပြ